Akhriso Xog Dheeraad Ah Oo Laga Helayo Khasaaraha Weerarkii Awdheegle. – Calamada.com
Akhriso Xog Dheeraad Ah Oo Laga Helayo Khasaaraha Weerarkii Awdheegle.
calamada August 15, 2019 2 min read
Labo Camaliyadood oo istish-haadi ah ayaa lagu weeraray saldhigga maleeshiyaatka Murtadiinta ee deegaanka Awdheegle ee wilaayada Sh/hoose, kuwaas oo geystay khasaare baaxadleh oo soo gaaray Murtadiinta sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan Mujaahidiinta.
Camaliyaatkan oo ahaa kuwoo is xigxigay ayaa mid ka mid ah waxaa lagu beegsaday ilinka hore ee xerada, halkaas oo ay joogeen koox maleeshiyaat ah oo ka mid ahaa ilaalada xerada.
Camaliyadaas oo uu fuliyey geesi kaxeynayey gaari miineysan ayaa Allaah fadligii geystay khasaare xoogan, laguna laayey maleeshiyaatkii waardiyaha ka hayey xerada.
Weerarkaas ka dib, Mujaahid kale oo hogaaminayey gaari miineysan ayaa isna xoog ku jiiray goobta uu qaraxu ka dhacay, islamarkaana gudaha u galay xerada, kaas oo Camaliyad Istish-haadi ah ka fuliyey gudaha xerada, islamarkaana laayey cadow fara badan.
Saraakiisha Mujaahidiinta ayaa noo sheegay in wax ka badan 50 askari oo ka tirsan Murtadiinta lagu dilay camaliyaatkaas laguna dhaawacay 70 kale.
Maleeshiyaatka dhaawacmay ayaa waxaa lagu soo daabulay diyaarad Hilicopter ah taas oo la sheegay ku dhawaad 3 mar iyadoo soo qaatay dhaawacyada liita.
Warar xog ogaal ah oo aan helnay ayaa sheegaya in 40 ka mid ah dhaawacyadu ay yihiin kuwo halis ah, islamarkaana hadda lagula tacaalayo magaalada Muqdisho.
Dadka dhintay waxaa ka jira saraakiil dhowr ah oo uu ka mid ahaa taliyihii heystay xerada oo la sheegay inuu ahaa sarkaal laba xidigle ah, halka sidoo kalena ay jiraan saraakiil dhowr ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyaatkaasi.
Marka laga soo tago khasaara nafeed, waxaa xerada ku burburay gawaari fara badan iyo agab military oo kala duwan.
Sida aan xogta ku helayno ugu yaraan 8 gaari oo shan ka mid ah ay ahaayeen kuwo gaashaaman ayaa lagu burburiyey camaliyada ka dhacday gudaha, islamarkaana ay waxyeelo kala duwan soo gaartay gaadiid kale oo dhowr ah.
Howlgaladan ayaa qeyb ka ah weeraro isdabajoog ah oo dhowrkii todobaad ee la soo dhaafay ay Mujaahidiintu ka wadeen Awdheegle iyo deegaanada ku xeeran kuwaas oo lagu caabinayey dhaq-dhaqaaqyo arbushaad ah oo uu cadowgu ka sameynayey deegaanadaasi.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo-14-12-1440 Hijri.
Next: Dilal Iyo Qaraxyo Ka Kala Dhacay Muqdisho Iyo Afgooye.